भिडियोमा हेर्नुहोस् बिहीबार दिनभरको समाचार | Ratopati
भिडियोमा हेर्नुहोस् बिहीबार दिनभरको समाचार
दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ ।
बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गराउनु भएका ओलीको प्रत्यरोपित मृगौलाले पनि सामान्य रुपमा काम गर्न थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
ओलीलाई आजबाट तरल र नरम आहार दिन सुरु गरिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्काले बताए ।
खड्काले ओलीका सबै भाइटल र ल्याब सूचकहरु पनि सामान्य अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिएकी समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि स्थिर रहेको बताइएको छ । उनलाई पनि आजबाट तरल र नरम आहार दिन सुरु गरिएको उनले बताए ।
यसैबीच भारत, पाकिस्तान, जापान लगायत देशका प्रधानमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले बताए ।
थापाले नेपालका लागि चिनियाँ, जापानी र पाकिस्तानी राजदूतहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको ओलीको बुधबार दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । १२ वर्षअघि भारतको एपोलो अस्पतालमा ओलीको पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
सरकारले मास्कको अपूर्ति र उत्पादन बढाउने विषयमा नीति क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको बताएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को प्रभाव नदेखिएको बताउँदै सरकारले संक्रमण हुनै नदिने गरी उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताएको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिपडाले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए ।
खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी अगाडी बढिरहेको बताए ।
कोरोनाका कारण पर्यटन, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
लगानीका अवसर, बजार आपूर्तिका सन्दर्भमा प्रभाव पर्ने कुराहरु अनुमान गर्न सकिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई सेयर बजारले तपाईलाई नरुचाएको हो ? भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा नै पूँजी बजारमा ठूलो नीतिगत सुधार भएको बताए । उनले अहिलेसम्मको पूँजीबजार हेर्दा विगत २ वर्षमा धेरै सुधार आएको र अर्थमन्त्रीको काम लगानी कर्तालाई अवसरसम्म पु¥याउने भएको बताए । लगानी कर्ताले कम्पनी वासलात, नाफा नोक्सान हेरेर गर्नुपर्ने, नीतिगत समस्या देखिएका छन् भनेर बसेर छलफल गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी, सरकारले गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार युवराज कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले स्वस्थ्य मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै तीन वटा समितिहरु गठन गरेर कोरोना भइरस भित्रिन नदिने गरी काम भइरहेको बताए ।
मन्त्रीको संयोजकत्वमा, सचिवको संयोजत्वमा र सम्बन्धित महाशाखा समितिको संयोजकत्वमा प्राविधिक कमिटी गठन गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जनशक्ति थपेर काम भइरहेको उनले बताए ।
एक सिफ्टमा ७ जनासम्म चिकित्सकसहितको टोली र रातिको सिफ्टमा ४ जनाको टोली विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा खटाइएको उनले बताए ।
सात वटै प्रदेशमा सरकारले टोलीहरु पठाएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता देवकोटाले नेपाल भारतका ३७ वटा सीमा नाकाहरुमा टोली खटाउने तयारी भइरहेको बताए ।
भारतले विभिन्न औषधिमा निर्यात प्रतिवन्ध लगाएपछि कसरी फुकुवा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए ।
सरकारले उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
सजकता अपनाउन जरुरी रहेकाले त्रासको वातावरण नफैलाउन आग्रह गर्दै उनले औषधि आपूर्ति, भीडभाड रोकथामका विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
कोरोना रोकथाम बैठक
नोभल कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा नाकाहरुमा कडाई गर्ने भएको छ ।
कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सीमा नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्ने तथा क्रसबोर्डर मिटिङ गर्ने र हेल्थ डेस्क बढाउने निर्णय गरेको हो ।
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वभर देखिन थालेको र खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकमा समेत देखिएकोले विमानस्थल र सीमामा सरकारले सुरक्षा बढाउन लागेको हो ।
त्यस्तै सीमामा आवागमन कम गर्ने, निकासी नियन्त्रण गर्ने, मास्क र औषधिको आपूर्तिमा समस्या पर्न नदिने गरी उत्पादन बढाउने, भारतबाट औषधी तथा आत्यावश्यक सामाग्री आयात गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
टेकुबाट बिरामी फरार
यता, कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका एक नेपाली शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट भागेर विराटनगर पुगेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले बोक्दै आएको मोबाइल ट्र्याक गर्दा विराटनगर पुगेको खुलेको हो ।
उनलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोली खटिएको बताइएको छ । सुनसरीको इटहरी घर भएका उनी गएराति साढे १० बजेतिर अस्पतालबाट भागेको जानकारी आएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार कोरियाबाट फर्किएका उनलाई परिवारले कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पताल लगेका थिए ।
चेकजाँचका क्रममा अस्पतालले भर्ना गरेपछि गएराति साढे १० बजेतिर अस्पतालको पछाडिपट्टीको झ्यालबाट फरार भएको बोगटीले जानकारी दिए ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले कोरोना भए–नभएको पुष्टि भएको छैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएको छ । यो भाइरको त्रासका कारण औपचारिक कार्यक्रम समेत धमाधम स्थगित गर्न थालिएको छ । यो भाइरस नेपालमा एक जनामा भएको पुष्टि भएपछि हालसम्म नयाँ संक्रमित भने फेला परेका छैनन् । संक्रमित पनि पूर्ण रुपमा निको भइसकेको अस्पतालले स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूतले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र (तस्बिरसहित)
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय (पूर्णपाठसहित)
सेनाको भ्रष्टाचारबारे रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिले जवाफ दिनुपर्ने सांसदहरुको माग (भिडियो सहित)
मिस वर्ल्ड २०१९ नेपाल आइपुगिन्
बीमाको भुक्तानी लिन अब पहिलेभन्दा सजिलो हुने, बीमा समितिले गर्‍यो यस्ता व्यवस्था
यसकारण मैले आफ्नी आमासँग विवाह गरेँ...
नेपाली सेना भित्रको भ्रष्टाचारको छलफलमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठक स्थगित भएको छ ।
बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने सन्देश मन्त्री समक्ष पु¥र्यादिन रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई निर्देशन समेत दिए ।
बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेना भित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति अनुपस्थित भएको भन्दै समितिको मर्यादामाथि प्रहार भएको बताए ।
सांसद झपटबहादुर रावलले विभागीय मन्त्री र सेनाको प्रमुख बिना भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर विषयमा छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
सांसद डिला संग्रौलाले नेपाली सेना भित्र अझैपनि आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेवाला छ भन्ने विषय आएकाले यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाली सेनाले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जनतालाई खुशी पार्न नसके समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टी नटिक्ने बताएका छन् ।
मदन भण्डारी फाउन्डेशन सामाजिक अभियान विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मदन भण्डारी छलफल शृङ्खला –५, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जनताको बहुदलीय जनवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले कम्युनिष्ट पार्टी टिक्नजनता खुसी हुनुपर्ने बताए ।
२१ औं शताब्दीको जनवादले प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको भन्दै उनले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले सर्वहारा वर्गको नारा दिएर मात्र नहुने र आफुलाई प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैंकमा सुन राखे ब्याज
अबदेखि बैंकमा सुन राखेर पनि ब्याज पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अबदेखि सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने भएको हो ।
परिपत्रअनुसार बैंकहरुले कम्तीमा २५ ग्राम सुन निक्षेपको रुपमा लिन सक्नेछन् । त्यसरी निक्षेपको रुपमा सुन स्वीकार गर्दा सो सुनको शुद्धता र तौल एकीन गरी निक्षेपकर्तालाई प्रमाणपत्र दिनुर्पे व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी प्रमाणपत्र दिँदा सुनको साँवा परिणाम, शुद्धता, निक्षेपको ब्याजदर, निक्षेपको अवधि र निक्षेपको सावा र ब्याज फिर्ता सुनमा लिने कि नगदमा भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, आफूले जम्मा गरेको सुनको साँवा र ब्याज सुनमै लिने हो कि नगदमा लिने हो भन्नेबारे समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निक्षेप कम्तीमा ३ वर्षदेखि बढीमा ५ वर्ष हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर भने बैंकहरु आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर ब्याजको भुत्तानी भने त्रैमासिक गणनाको आधारमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ७ दिनभित्र यस्तो निक्षेप स्वीकार गर्ने कार्र्यविधि बनाउन निर्देशन समेत लिएको छ ।
आगामी महिना त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुन लागेको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) स्थागित भएको छ ।
नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यान दिएर आउँदो चैत १ गतेदेखि हुन लागेको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) स्थागित भएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ईपीएलका प्रवन्ध निर्देशक अमिर अख्तरले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सम्बन्धित निकायहरुसँगको परामर्शमा प्रतियोगिता स्थागित गरिएको बताए ।
निकुञ्ज वरिपरि बस्ने स्थानीय जनताहरुको स्थानान्तरण तथा उनीहरुले पाउने राहतको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरुले विभिन्न निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन पछि यस्तो माग गरेका हुन् । सांसद भूपेन्द्र बहादुर थापाले शूक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बस्ने किसानहरुले बालिनाली क्षति भएको अवस्थामा कुनै प्रकारको राहत पाउने अवस्था नरहेको बताए ।